Filimka Toilet Ek Prem Katha Sadaashii Ugu Dambeesay Ee Laga Bixiyay Iyo Halka Uu Hiigsanaayo | Filimside –
Filimka Toilet Ek Prem Katha Sadaashii Ugu Dambeesay Ee Laga Bixiyay Iyo Halka Uu Hiigsanaayo
Aug 10, 2017 - 4 Jawaabood
Filimka weyn Toilet Ek Prem Katha waqtigiisa la daawan lahaa waxaa ka harsan saacado kooban sidaa darteed waxaa laga soo bandhigay sadaashii ugu dambeesay, halka uu hiigsan doono, waxyaabaha guusha ka caawin karo iyo waxyaabaha caqabad ku noqon karaan.
TEPK Waxyaabaha Guusha U Horseedi Karaan:
Goos gooskiisa oo siweyn loo soo dhaweeyay.
Awooda Akshay Kumar oo halka ugu sareesay taagay madaama 4-tiisa filim ee ugu dambeesay Hit noqdeen
Fariinta filimkaan oo ka hadleyso mowduuca hada Hindiya laga doodayo oo ah helista musqulo nadiif ah in wasaqda wadooyinka laga yareeyo.
Xiliga la daawanayo oo ku baagan todobaadka xurnimada Hindiya 15-ka bishan August oo ah todobaad Boxoffice-ka barwaaqo u ah iyo sidoo kale labo todobaad inuu kaligiis tiyaatarada ku yahay.
TEPK Waxyaabaha Caqabad Ku Noqon Karaan Guushiisa:
Goos gooska filimkaan markii lasoo dhaweeyay kadib hadal heyntiisa hoos ayay u dhacday waxaana qalad ahayd in xili hore ku dhawaad labo bilood iyo bar ka hor goos gooskiisa lasoo bandhigay.
Xayeysiin balaaran Akshay Kumar uma sameynin filimkaan madaama uu hawlo kale ku mashquulay kaliya todobaadyadii ugu dambeesay ayuu xayeysiis u sameeyay.
Ma ahan filim mada daalo dhameestiran leh madaama Action iyo heeso shidan laheydn sidaa darteed waxay ku xiran guushiisa maalmo marka uu saarnaado sida ay dadka usoo dhaweeyaan sheekadiisa ee fagta hore si weyn kuma furmi doono.
Muusigada filimkaan siweyn uma gadmin madaama heesihiisa kuwo iska dhex dhexaad ah noqdeen saameyn ahaan.
Director-ka filimkaan sameeyay Shree Narayan Singh waa shaqsi wal wal laga qabo waayo waligiis hal filim ayuu sameeyay sanadii 2012 waana Yeh Jo Mohabbat Hai oo ahaa filim iska yar kaasi oo bur buray, marka waxa uu la imaan karo lama hubo iyo qaabka uu sheekada isugu daba ridi karo.
TEPK Maalinta Kowaad Muxuu Keeni Karaa:
Akshay Kumar filimadiisii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwo bilaabashadooda dhex dhexaad iyo fiicnaan isugu jireen tusaale ahaan maalinta kowaad filimadiisa qaar ee dhawaanahan la daawaday 11 crore (Airlift), 15 crore (Housefull 3), 13.50 crore (Rustom) iyo 12 crore (Jolly LLB 2).
Sida darteed shabakada Boxoffice India waxay ku sadaalinee TEPK in filimada sare uusan ka bilaabasho wanaagsanaan karin waxaana loo badinaa sida Jolly LLB 2 oo kale maalinta kowaad 12 Crore inuu keeni doono, hadii sida Housefull 3 uu ku furmana warkiisa iskaba dhaaf guul waali ah ayuu gaari doona.
TEPK waa filim isku haleenayo sheekadiisa inay dadka oo dhaweyn doonaan marka nidaamka waalida filimada ku furmaan ma sameyn doono ee si dhex dhexaad ah ayuu ku bilaaban doonaa kadibna gadaal ayuu siweyn kaga kici doonaa hadii sheekadiisa lasoo wada dhaweeyo.
Filimka TEPK Cimri Ahaantiisa Halkuu Gaari Karaa:
Ayadoo la tixgalinaayo waxyaabaha filimkaan guusha ku caawin karaan iyo waxyaabaha caqabada ku noqon karaan waxaa lagu sadaalinaa TEPK in cimri ahaantiisa gaari doono 110 Crore ilaa 115 Crore sidaasna Hit dhameestiran ku noqon doono.
Hadii TEPK inta lagu sadaaliyay gaari waayo waxay noqon doontaa fanka Hindiya dhulka sii gali doono dhaqaale ahaan waayo weli waxay kasoo kaban la’yihiin jabkii ku habsaday Salamn Khan iyo Shah Rukh Khan oo dhawaan filimadooda fashilmee.
Gunaanad: TEPK hadii sheekadiisa ay noqoto mid 100% u wanaagsan sida hada loo hadal haayo lacagaha hordhaca ah ee lagu sadaaliyay waa hubaal inuu dhaafi doono markaasna rajada ugu wanaagsan ee la qabo waxay ilaa 150 Crore inuu gaari karo.
Waxaa Aqriyay: 1,262
guul King of comedy
Flop Weeye Surely !!!!
airlif, housefull3, rustom, jolly llb2, filimdan madadaalo dhamestiran ma lahen hadana wada hits ayay noqdeen, TEPK waxa u heesta todobad fasax weyn jiro 15Aug, kaligi ayuna tiyatarada ku yahay, blockbuster ka filo madaama sanadki hore rustom xiligan oo kale la saaray hadana film super star hrithic waday lala saaray misana super hit noqday, TEPK oo kaligi tiyaatarada ku ah maxad ka filan, blockbuster hakaba yareyn wa hubaal
Sxb Zaki Abdi wali mahayno,
plotkii ama sheekadii,